DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA ASUS A52J - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Download ndị ọkwọ ụgbọala maka ASUS A52J
Ọtụtụ ndị na-eleda ịdị mkpa nke ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala niile maka laptọọpụ. A na-eme nke a site na nchekwa data dị ukwuu nke software Windows, nke arụnyere na akpaghị aka mgbe ị wụnye sistemụ. N'ọnọdụ ụfọdụ, onye ọrụ ahụ anaghị ege ntị na ngwaọrụ ndị na-arụ ọrụ ugbu a. Ha na-ekwu ihe mere ị ga-eji achọ onye ọkwọ ụgbọala maka ya, ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ ọ bụla. Otú ọ dị, ọ na-atụ aro ka ị wụnye ngwanrọ nke e mepụtara maka otu ngwaọrụ. Ngwaọrụ dị otú ahụ nwere uru karịrị nke ahụ na-enye anyị Windows. Taa, anyị ga-enyere gị aka n'ịchọta ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka laptọọpụ ASUS A52J.
Nhọrọ maka nbudata ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala
Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị nweghị CD na ngwanrọ dị na laptọọpụ ọ bụla, echegbula. N'oge ụwa a, e nwere ọtụtụ ụzọ dị irè ma dị mfe iji wụnye ngwanrọ dị mkpa. Nanị ọnọdụ bụ inwe njikọ dị na Intanet. Ka anyị gaa n'ihu na nkọwa nke ụzọ ha onwe ha.
Usoro 1: Ụlọ Ọrụ Ụlọ Ọrụ nke Ụlọ Ọrụ
Ndi ọkwọ ụgbọala ọ bụla maka laptọọpụ ga-ebu ụzọ nyochaa ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti rụrụ. Na ndị dị otú ahụ akụnụba nwere ngwanrọ dị mkpa dị mkpa maka ịrụ ọrụ nke ngwaọrụ ahụ. E wezụga bụ, ma eleghị anya, naanị ngwanrọ maka kaadị vidiyo. Ndị ọkwọ ụgbọala dị otú ahụ ka mma ibudata site n'aka onye nrụpụta nke nkwụnye. Iji mee usoro a, ọ dị mkpa ka ị rụọ ọrụ ndị a dị iche iche.
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ ASUS.
Na isi mmalite nke isi peeji nke (ebe kachasị elu nke saịtị ahụ) anyị na-achọta eriri ọchụchọ. Na nke a, ị ga-abanye ihe nlereanya nke laptọọpụ gị. Na nke a, anyị tinye uru A52J n'ime ya. Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị na-agbanye "Tinye" ma ọ bụ akara ngosi na-eto eto na nri nke akara n'onwe ya.
A ga-akpọrọ gị gaa na saịtị ebe ịchọta ọchụchọ niile maka ajụjụ a ga-egosi. Họrọ ụdị laptọọpụ gị site na ịpị aha ya.
Rịba ama na na ihe atụ, e nwere akwụkwọ ozi dị iche na njedebe nke aha nlereanya ahụ. Nke a bụ nkọwa dị iche iche nke dị otú ahụ, nke na-egosi nanị atụmatụ nke usoro ihe vidiyo. Aha zuru oke nke nlereanya gị, ị nwere ike ịchọpụta site n'ile anya n'azụ laptọọpụ. Ugbu a laghachi na usoro.
Mgbe ịhọrọ akara ngosi laptọọpụ site na listi ahụ, akwụkwọ nwere nkọwa nke ngwaọrụ ahụ ga-emeghe. Na ibe a, ị ga-aga ngalaba. "Nkwado".
N'ebe a ị ga-achọta ozi niile dị mkpa na akwụkwọ na-ejikọta ihe nlereanya nke laptọọpụ ahọrọ. Anyi choro nkeji "Ndị ọkwọ ụgbọala na ọrụ". Gaa na ya, na ịpị aha ahụ.
Tupu ịmalite nbudata, ịkwesịrị ịhọrọ Os nke ị rụnyeworo. Echefukwala iburu n'uche njirimara nke sistemụ arụmọrụ. Ị nwere ike ịme nhọrọ gị na menu ndapụta kwekọrọ.
N'ihi ya, ị ga-ahụ ndepụta ndị ọkwọ ụgbọala niile ị nwere ike ịwụnye na sistemụ arụmọrụ ahọrọ. A na-ahazi software niile. Naanị ị ga-ahọrọ ngalaba ma mepee ya site na ịpị aha ngalaba ahụ.
Ihe dị n'ime ìgwè ahụ ga-emeghe. A ga-enwe nkọwa nke ọkwọ ụgbọala ọ bụla, nha ya, bọtịnụ ntọhapụ na ibudata. Iji malite ibudata, ị ghaghị ịpị akara "Global".
N'ihi ya, ị ga-ebudata ebe nchekwa ahụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ghaghị iwepụta ihe niile dị na ya ma mee otu faịlụ a na-akpọ "Mbido". Site n'ịgbaso ntuziaka nke Wizard Wụnye, ịnwere ike ịwụnye ngwanrọ dị mkpa. N'oge a, a ga-agwụcha software ahụ.
Usoro nke 2: ASUS Special Programme
Gaa na nke ama ama ama nke ndi otu ndi ozo maka laptọọpụ ASUS A52J. Echefula igbanwe OS na bit ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Chọta ngalaba "Ntuziaka" ma mepee ya.
Na ndepụta nke ngwanro niile a na ngalaba a, anyị na-achọ ọrụ a na-akpọ "ASUS Live Update Utility" na ibu ya. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ aha "Global".
Wepụ faịlụ niile site na ebe nchekwa ebudatara. Mgbe nke ahụ gasịrị, jiri faịlụ ahụ tinye faịlụ ahụ "Mbido".
Usoro nhazi agaghị ese ya, ebe ọ dị mfe. I kwesịghị inwe nsogbu n'oge a. Naanị ị ga-agbaso ihe ndị ahụ na windo dị iche iche nke Wizard Wụnye.
Mgbe ejiri ya rụọ ọrụ nke ọma, mee ya. Ụzọ mkpirisi gaa usoro ihe omume ị ga-ahụ na desktọọpụ. Na windo nke usoro ihe omume ị ga-ahụ bọtịnụ dị mkpa. "Lelee maka mmelite". Pịa ya.
Mgbe ASUS Live Update nyochaa usoro gị, ị ga-ahụ windo ahụ gosipụtara na nseta ihuenyo n'okpuru. Iji tinye ihe niile achọtara, naanị ị ga-ahụ bọtịnụ otu aha ahụ. "Wụnye".
Ọzọ, usoro ahụ ga-achọ ibudata faịlụ nwụnye ndị ọkwọ ụgbọala. Ị ga-ahụ ọganihu nbudata na windo ahụ meghere.
Mgbe ebudatara faịlụ niile dị mkpa, ọrụ ahụ ga-egosipụta windo na ozi gbasara imechi ngwa ahụ. Ọ dị mkpa iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala n'azụ.
Mgbe nkeji ole na ole, usoro nhazi ahụ zuru ezu ma ị nwere ike iji laptọọpụ zuru ezu.
Usoro 3: Nzube Azuzu Ebumnuche
Anyị na-ekwu maka ụdị usoro a na otu n'ime nkuzi anyị.
Maka usoro a, ị nwere ike iji ezigbo uru ọ bụla site na ndepụta ahụ dị n'elu, ebe ọ bụ na ha niile na-arụ ọrụ dịka otu ụkpụrụ ahụ si dị. Otú ọ dị, anyị na-enye ndụmọdụ siri ike iji DriverPack Solution maka nzube a. O nwere isi ihe kasịnụ nke ngwanrọ ma kwado ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu nke ngwaọrụ sitere na mmemme niile yiri ya. Iji ghara ịmepụta ozi dịnụ, anyị na-atụ aro na ị na-amụ nkuzi pụrụ iche, nke ga-agwa gị banyere ụzọ niile nke ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala site na iji DriverPack Solution.
Nzọụkwụ 4: Na-ebugharị ọkwọ ụgbọala site na iji NJ ngwaọrụ
Ngwa ọ bụla a na-amaghị na ya "Onye njikwa ngwaọrụ" nwere ike ịmata aka site na nchọpụta pụrụ iche ma budata ndị ọkwọ ụgbọala maka ngwaọrụ dị otú ahụ. Ihe kachasị mkpa nke usoro a dị mfe. Ịkwesịrị ịchọpụta ID nke ngwa ahụ ma jiri NJ ahụ chọtara na otu n'ime ọrụ ọchụchọ kọmputa. Mgbe ahụ budata ma wụnye software dị mkpa. Enwere ike ịchọta nkọwa zuru ezu na ntuziaka site na nkwụsị ụkwụ na nkuzi pụrụ iche anyị nwere.
Usoro 5: Iji Onye njikwa ngwaọrụ
Usoro a adịghị arụ ọrụ, n'ihi ya, i kwesịghị itinye ya anya dị elu. Otú ọ dị, n'ọnọdụ ụfọdụ naanị ọ na-enyere aka. Nke bu eziokwu bụ na mgbe ụfọdụ, a ghaghị ịmanye usoro ịchọta ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọala. Nke a bụ ihe dị mkpa ka eme.
Meghee "Onye njikwa ngwaọrụ" jiri otu n'ime ụzọ ndị akọwapụtara na nkuzi.
Na ndepụta nke ngwaọrụ niile anyị na-achọ ndị na akara akara ma ọ bụ akara ajụjụ na-esote aha ahụ.
Na aha ngwá ọrụ ndị dị otú a, ị ga-ehichapụ aka ma họrọ "Ndị ọkwọ ụgbọala di elu".
Na windo nke mepee, họrọ ihe ahụ "Nchọpụta akpaaka". Nke a ga-ekwe ka usoro ihe omume ahụ kpuchie laptọọpụ gị maka ọnụnọ nke ngwanrọ dị mkpa.
N'ihi ya, usoro ọchụchọ ga-amalite. Ọ bụrụ na ọ na-aga nke ọma, a ga-arụnye ndị ọkwọ ụgbọala ahụ ma ngwaọrụ ahụ ga-edozi ya n'ụzọ ziri ezi.
Biko mara na maka nsonaazụ kacha mma, ọ ka mma iji otu n'ime ụzọ ndị a kọwara n'elu.
Site na iji ntuziaka anyị, ị ga-anagide na ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka laptọọpụ gị ASUS A52J. Ọ bụrụ na n'oge nhazi ma ọ bụ njirimara nke akụrụngwa ị nwere ihe isi ike ọ bụla, dee banyere ya na ihe ndị a n'isiokwu a. Anyị ga-eche ọnụ maka nsogbu ahụ ma dozie ya.